WAR DEG DEG AH :Raisul wasaaraha Somalia oo shqa joojin kusameeyay mid ka mid ah wasiiradiisa. – The Voice of Northeastern Kenya
WAR DEG DEG AH :Raisul wasaaraha Somalia oo shqa joojin kusameeyay mid ka mid ah wasiiradiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shaqada kajoojiyaya Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mukhtaar Mahad Daa’uud, kadib warqad ka soo baxday xafiiskiisa.
Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa Sabtidii aynu soo dhaafanay waxa ay xafiiskiisa shaqo ugu tageen Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda arrimaha dibadda, si ay u soo xiraan , waxaana ka dhashay muran sababay inuu soo fara geliyo raisul wazaaraha Somalia mudane Hassan ali kheyre .
← DHAGEYSO Warka Duhurnimo ee idacada star fm 1:30 PM
DHAGEYSO Golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ku dhawaaqay ciidamada u xil saaran sugaya amniga Muqdisho. →